Posted on - 2020-11-27 16:22:17
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိစေဖို့ သိထားသင့်တဲ့အချက်များ
မင်္ဂလာပါရှင်။ Aung Myin Online Learning ကနေ ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု ရှိလာအောင် ဘယ်လို နေထိုင်ရမလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာ ကို ဆွေးနွေးသွားမှာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုဆိုတာဟာ သဘာဝအတိုင်း ရလာတာ မဟုတ်ပဲ ပြုစုပျိုးထောင်ယူရတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။. ကဲ..ဒါဆိုရင် ဘယ်လိုပျိုးထောင်ရမလဲ ကြည့်ကြရအောင်။
Self-confidence ဆိုတဲ့ "ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု" ဆိုတာဟာ ကိုယ့်ရဲ့အရည်အချင်း၊ အရည်အသွေး၊ ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအပေါ် ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ စိတ်ခံစားချက် တစ်ခုလို့ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုလို့ရပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ စိတ်ဟာ စိတ်ကျန်းမာရေး၊ ကိုယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိရင် ဘယ်အရာကိုမှ တွေးပူမနေဘဲ အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်ဖြစ်ကြတာမို့ အဲ့လိုလူတွေဟာ အချိန်တွေကို အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်ပြီး ထိုက်တန်တဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ ရတတ်ကြပါတယ်။
ဒီလိုမျိုး အဘက်ဘက်ကနေ အရေးကြီး လိုအပ်လှတဲ့ "ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှု" ဆိုတဲ့ အဖိုးတန်စိတ်ထားလေး ရှိလာအောင် ဘယ်လိုရယူကြမလဲဆိုတာကို ဆွေးနွေးကြည့်ရအောင်။
၁။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အခြားသူနဲ့ နှိုင်းယှဉ်နေတာကို ရပ်တန့်လိုက်ပါ။
လူတွေရဲ့ သဘာဝတစ်ခုက ကိုယ်က လူတစ်ယောက်ကို အတိုင်းထက်လွန် အားကျလေလေ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သူ့လောက်တောင် အဖြစ်မရှိဘူးဆိုပြီး ဆိုးဆိုးဝါးဝါး မြင်လာလေပါဘဲ။သူများကို ဂရုစိုက်နေတဲ့အတွက် ကိုယ့်ကိုကိုယ် မမြင်တော့ဘဲ အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ လွဲချော်သွားတတ်ပါတယ်။
လူတိုင်းက ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင် ပြေးလမ်းမှာ ပြေးနေကြသူတွေပါ။ ဘဝဟာ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။🙅‍♀️🙅‍♀️ဒါ့ကြောင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဘဲ ဂရုစိုက်ပြီး အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါ။😉
၂။ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ပါ။
ကိုယ့်စိတ်ကူးထဲက လှလှပပ ခန္ဓာကိုယ်မျိုးလေးလို ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် ဂရုတစိုက်ထိန်းသိမ်းပါ။ ပိန်ချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် အစားလည်းမလျော့ဘဲ သူများတွေကိုတွေ့မှ သိမ်ငယ်တာမျိုးက ဖြစ်မနေသင့်ဘူးလေနော်။ ဗိုက်ကြီးပူပြီး မျက်နှာကိုလည်း မပြင်မဆင်ဆို ဘယ်လို ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိနိုင်ပါတော့မလဲ။ကျ န်းမာရေးကိုလည်း ဂရုစိုက်ပြီး ပြင်ပြင်ဆင်ဆင်လေး နေသင့်ပါတယ်။❤🤗
မိတ်ကပ်တွေ ယိုနေဖို့ မလိုပါဘူး။သပ်သပ်ရပ်ရပ် နေထိုင်ဖို့ဘဲလိုတာပါ။
၃။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မေတ္တာထားပါ။
ကိုယ်ကအမှားလုပ်မိတဲ့အခါ ၊ကျရှုံးမှုတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရတဲ့ အချိန်လိုမျိုးတွေမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကြင်နာ နှစ်သိမ့်မှုစိတ်လေး ထားရပါမယ်။ အဲ့ဒီလိုအချိန်တွေမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် နာကျင်အောင် ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း စကားလုံးတွေ သုံးပြီးပြောနေခြင်းက သင့်ကို စိတ်အား မတက်စေပါဘူးနော်။ ဒီ့ထက်ပိုဆိုးသွားနိုင်ပါတယ်။ စိတ်က မသိစိတ်နဲ့ သိစိတ်ဆိုတာရှိတာမို့ သတိထားပါ။
လူတိုင်းမပြည့်စုံဘူးဆိုတာ သတိရပါ။ ကိုယ့်နာမည်ကိုယ်ခေါ်ပြီး အားပေးနှစ်သိမ့်စကားဆိုပြီး ရှေ့ဆက်ကြိုးစားပါ။💓💓
၄။ ကိုယ့်ရဲ့ သံသယစိတ်တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ပါ။
လူအများစုက တစ်ခုခုမလုပ်ခင် အတွေးထဲမှာ အဆိုးဘက်ကို အရင်တွေးမိတာကများပါတယ်။
ငါအမှားတွေ လုပ်မိရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?? စသဖြင့် တွေးမိတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလို တွေးကြောက်နေမယ့်အစား ငါကြိုးစားကြည့်မယ်။ ငါအတွေးထဲကလောက် မဆိုးရွားလှပါဘူးလို့ တွေးမှတ်ပါ။
ဥပမာ-ကိုယ်က မိန့်ခွန်းပြောမယ်ဆိုရင် မပြောခင်မှာ ကိုယ့်ရဲ့မိသားစု,သူငယ်ချင်းတွေ ရှေ့မှာ လေ့ကျင့်သွားပါ။ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိလာသလို ခံစားရပြီဆိုရင် အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့် လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာ ၁၀၀% ယုံကြည်မှုရှိလာမယ့်အချိန်ထိကို စောင့်မနေပါနဲ့။💁‍♀️
နံပါတ်-၄ လိုဘဲ အတွေးထဲအဆိုးတွေ တွေးနေမယ့်အစား လက်တွေ့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဆောင်ရွက်လိုက်ပါ။
ကိုယ့်အတွေးထဲကလို လက်တွေ့မှာ အဲ့လောက် ဆိုးဆိုးဝါးဝါး မဖြစ်ဘူးဆိုတာ သိလာပါလိမ့်မယ်။
တစ်ချို့တွေက အတိတ်က ဖြစ်ရပ်ဆိုးတွေကြောင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု မရှိတော့တာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ စိတ်ဆရာဝန်တွေနဲ့ တိုင်ပင် ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။👩⚕️
🎁《ကောင်းမွန်တဲ့ သဘောထားတွေကို ပျိုးထောင်နိုင်ဖို့အတွက်…
- မကောင်းမြင်တတ်တဲ့ အတွေးတွေကို ဖော်ထုတ်ပါ။
လူတွေရဲ့ စိတ်ထဲက စကားသံတွေက အဆိုးဝါဒဘက်ဆီကို အရမ်း ရောက်လွယ်ပါတယ်။ ဒီလိုမကောင်းမြင်စိတ်က ကိုယ့်အတွက် အကူအညီလည်း မဖြစ်သလို ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုတွေနဲ့ အလှမ်းဝေးနေအောင် ဆွဲထားတဲ့ အရာတွေဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
- အဆိုးမြင်စိတ်တွေကို အကောင်းမြင်စိတ်အဖြစ်ပြောင်းလဲပါ။👍
ဥပမာ- ငါဒီမြောင်းကို ကျော်ကိုကျော်နိုင်တယ်လို့ တွေးရင် မြောင်းဘယ်လောက်ကြီးပါစေ တကယ်ကို အောင်အောင်မြင်မြင် ကျော်လွှားနိုင်ပါတယ်။
မကျော်နိုင်ဘူးလို့ အခါခါတွေးနေမိရင် ဘယ်လောက် ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ မြောင်းငယ်လေးဖြစ်ပါစေ ပြုတ်ကိုပြုတ်ကျပါတယ်။
- ဦးနှောက်ထဲမှာ အဆိုးမြင်စိတ်တွေထက် အကောင်းမြင်စိတ်တွေကို နေရာပိုပေးပါ။
အဆိုးတွေကို အကောင်းတွေအဖြစ် တွေးမှတ်ပါများလာရင် သဘာဝအတိုင်း အခက်အခဲတွေ ကြုံလာတဲ့အခါ အခွင့်အလမ်းအသစ်တွေကို သူများနဲ့မတူတဲ့ ရှုထောင့်ကနေ မြင်လာပါလိမ့်မယ်။👏👏
လူတွေရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေက သူ့တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်း အခြေအနေတွေအပေါ် မူတည်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းပေမယ့် ကိုယ့်ကို အမြဲဝေဖန်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းနေရသူတွေ၊သူတို့ရဲ့ အမြင်ကိုသာ ရှေ့တန်းတင်တဲ့ မိသားစုနဲ့ နေနေရသူတွေဟာ အဆိုးမြင်စိတ်သာတိုးပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုလည်း မရှိတော့ပါဘူး။ဒါတွေက လောကမှာ အမြဲ သက်သေနှင့်တကွ တွေ့မြင်နေကြရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေပါ။ အကောင်းမြင်စိတ်ရှိသူတွေကို အချိန်ယူစဉ်းစား ရေးမှတ်ထားပြီး သူတို့တွေနဲ့ အချိန်ဖြုန်းမယ် သူတို့ရဲ့ အကောင်းမြင်စိတ်တွေကို မျှဝေယူမယ်ဆိုတဲ့ ပန်းတိုင် တစ်ခုထားပါ။💪👑
- သင့်ကို ယုံကြည်မှု လျော့နည်းစေတဲ့ အရာတွေကို ဖယ်ရှားပါ။
အတိတ်က မှတ်ဉာဏ်ဆိုးတွေကို ပြန်ပေါ်စေတဲ့ အရာတွေကို ဖယ်ရှားပါ။ကိုယ်နဲ့ မတော်တဲ့ အင်္ကျီတွေကို ထားပြီး ဝတ်မရတိုင်း စိတ်ဆင်းရဲ နေရမယ့်အစား ရှင်းပစ်ပါ။ကိုယ့်ရဲ့ confidence ကို လျော့ပါး ထိခိုက်စေတဲ့ နေရာတွေမှ စွန့်ခွာပါ။ ကိုယ့်ကို အဆိုးမြင်စေတဲ့ အရာတွေအားလုံး မဖယ်ရှားနိုင်ပေမယ့် လျော့ပါးသွားအောင် ဘယ်လို ကြိုးစားဖယ်ရှားရမလဲ စဉ်းစားပါ။🤔👍
- ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းကို ဖော်ထုတ်ပါ။🧐
လူသားတိုင်းဟာ သူ့အရည်အချင်းနဲ့ သူတစ်ထောင့်တစ်နေရာမှာ ထူးချွန်ကြပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ပါရမီပါရာ ဝါသနာကို အာရုံစိုက်ပါ။ကိုယ့်ရဲ့ အရည်အချင်းတွေ အတွက် ဂုဏ်ပြုပါ။ကိုယ်စိတ်ဝင်စား ဝါသနာပါရာကို လုပ်နေခြင်းက ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု တိုးပွားစေပြီး ကိုယ်နဲ့ ဝါသနာတူ စိတ်တူတဲ့ မိတ်ဆွေတွေလည်း ရရှိနိုင်ပါတယ်။
- ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဂုဏ်ယူပါ။🏆🏅🥇
ကိုယ့်ရဲ့ Skill တွေ၊ Talent တွေကို ဂုဏ်ပြုရုံသာမက ကိုယ့်ရဲ့ သဘာဝ ပင်ကို အရည်အသွေးတွေကိုလည်း ရှာဖွေပါ။ဟာသဉာဏ်ရွှင်တာ၊စာနာစိတ်ကြီးမားတာ၊တစ်ဖက်လူရဲ့ စကားကို နားထောင်နိုင်စွမ်း ကြီးမားတာ၊စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ကောင်းကောင်း ကိုယ်တွယ်နိုင်တာ စတဲ့ ပင်ကိုစရိုက်တွေရှိနေနိုင်ပါတယ်။သေချာ ရှာဖွေ ဖော်ထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်မှာ ထူးခြားတဲ့ အရည်အချင်းတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာကို သတိထားမိလာမှာပါ။
- အများရဲ့ ချီးမွမ်းစကားတွေကို တင့်တယ်စွာ လက်ခံပါ။👏🤩
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု နည်းပါးသူတွေဟာ သူတို့ကို တခြားသူတွေက ချီးမွမ်းစကား ပြောဆိုလာတဲ့ အခါ "ဒီလူက သူတို့ကို လိမ်ပြောနေတာ ဒါမှမဟုတ် အထင်မှားနေတာ"လို့ စိတ်ထဲတွေးမိတတ်ကြပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ပါနဲ့။ ချီးမွမ်းစကားတွေကို နှလုံးသားထဲ စွဲမှတ်ပြီး အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ တုံ့ပြန်ပါ။ ကိုယ့်ကို လာချီးမွမ်းတဲ့အခါ ပြုံးပြတာဖြစ်ဖြစ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် စသဖြင့် ခွန်းတုန့်ပြန်ပါ။ ချီးမွမ်းတဲ့သူတွေကို အသိအမှတ်ပြုကြောင်းပြသပါ။ အကယ်၍ သူတို့က ကိုယ့်ကို လိမ်ပြောနေတယ်ဆိုရင်တောင် အဲ့ချီးမွမ်းစကားကနေ အင်အားတွေရယူပြီး ပိုကောင်းအောင်ကြိုးစားပါ။You can do it!!!💪💪👏🏆
- မှန်ကြည့်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် အမြဲပြုံးပြပါ။😁
Facial Feedback Theory အရ လူတစ်ယောက်ရဲ့ မျက်နှာအမူအရာက မြင်တွေ့ရသူရဲ့ဦးနှောက်ထဲက Emotion ဖြစ်ပေါ်စေမှုတွေကို ပိုအားကောင်း လာစေပါတယ်တဲ့။ကိုယ်ကမျက်နှာ စူပုတ်နေရင် မြင်ရသူကလည်း တဖြည်းဖြည်း အမြင်မကြည်တော့ဘဲ မုန်းသွားတတ်ပါတယ်တဲ့😨။
☆ဒီလို သဘောတရားကြောင့် သင်ဟာနေ့တိုင်း မှန်ကြည့်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် အလှဆုံး ပြုံးပြလိုက်ပါ။☆
ဒီလိုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် သင်ဟာ ပျော်ရွှင်နေသလို ခံစားလာရပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုတွေ တိုးလာပါလိမ့်မယ်။နောက်ပြီး ကိုယ့်ရုပ်ရည်ရဲ့ အရှိတိုင်းကို လက်ခံလာပါလိမ့်မယ်။😍😍
သူစိမ်းတွေ ပြည့်နေတဲ့ ပွဲတစ်ခု သွားရတယ်ဆိုပါစို့။ကိုယ်က လူတိုင်းကို ပြုံးပြမယ် စကားပြောကြည့်မယ်..ဒါမှမဟုတ် ပြုံးပြုံးလေးနေပြီး စိတ်ရှင်းရှင်းလေးနေမယ် ဆိုရင် ရောင်ပြန်ဟပ်မှုနိယာမ အရ တခြားသူတွေကလည်း ကိုယ့်ကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် တုံ့ပြန်လာမှာပါ။အဲ့ပွဲထဲ သူငယ်ချင်းအသစ်ပါ ရသွားရင် ကိုယ်က သက်သောင့်သက်သာ ခံစားလာရပြီး ယုံကြည်မှု ရှိလာစေနိုင်ပါတယ်။❤
ဒါပေမယ့် တစ်ခုမှာချင်တာက ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုလုံးဝ မရှိတာရယ်၊ယုံကြည်မှု လွန်ကဲတာရယ် အဲ့၂ခုလုံးက လုံးဝမကောင်းပါဘူး။😖
ယုံကြည်မှု လွန်ကဲနေတဲ့ သူတွေဟာ အမှားအယွင်းတွေ ပိုလုပ်မိတတ်ပါတယ်။
ဥပမာ- Presentationလုပ်တာ အရမ်းတော်တဲ့သူဟာ လေ့ကျင့်ဖို့ မလိုဘူးဆိုတဲ့ စိတ်ကြီးစိုးနေတာမို့ မပြင်မဆင် နေစေတတ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာ ကောင်းတဲ့သူမို့ စာမလုပ်ဘဲ သွားဖြေသူတွေဟာ အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ စာမေးပွဲကျတတ်ကြပါတယ်။ ဆိုင်ကယ်စီးကျွမ်းတဲ့သူကလည်း သူက ကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုပြီး စတိုင်လ်ထုတ် မောင်းရာကနေ နောက်ဆုံးသေလမ်းကို ဆိုင်ကယ်မောင်းပြီး သွားလိုက်ရတာပါဘဲ။
ဒါ့ကြောင့် အသိ၊သတိနဲ့ ယှဉ်ပြီး နေထိုင်ပါ။🙏
နောက်ပြီး အများရဲ့ အမြင်ကို ထည့်စဉ်းစားစရာမလိုဘူး၊ဂရုစိုက်စရာမလိုဘူး ဆိုပေမယ့် သူ့နေရာနဲ့သူ ထည့်သွင်း စဉ်းစားစရာတွေ ရှိပါတယ်။
ဥပမာ - ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ်မို့ ဝတ်ချင်ရာ ဝတ်တယ်ဆိုပေမယ့် သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ အရှေ့မှာ အတိုအပြတ်နဲ့ မနေသင့်ပါဘူး။ ကိုယ့်ဖုန်းနဲ့ ကိုယ် ဆိုပေမယ့် Public area မှာ ဖုန်းအကျယ်ကြီး မပြောသင့်ပါဘူး။
အကောင်းမြင်စိတ်ရှိပြီး ကိုယ့်အရည်အချင်းကို သိတဲ့သူဟာ ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ ရပ်တည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးဘဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူတွေ ဖြစ်လာကြပါစေ။🙏❤